Degso Fraps loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (2.22 MB)
Fraps waa barnaamij duubista shaashadda oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay duubaan fiidiyowyo ay ku ciyaaraan, ka qaataan shaashadaha iyo inay cabiraan kombiyuutarkooda
Fraps, waa mid kamid ah softiweerradii ugu horeeyey ee maskaxda ku soo dhaca markay timaado toogashada fiidiyowyada ciyaarta, waa shaashad duubista fiidiyowga shaashadda oo si fudud u adeegsigeeda iyo wax qabadkeedaba u muuqata. Ka mid ah barnaamijyada duubista shaashadda, waxaa jira barnaamijyo aad u yar oo awood u leh inay toogtaan fiidiyowyada ciyaarta. Barnaamijku waa inuu lahaadaa taageerada DirectX iyo OpenGL si loo badbaadiyo sawirada shaashadda sida fiidiyowga ee ciyaaraha. Muuqaaladan, Fraps waxay ku duubi karaan fiidiyowyada ciyaartaada shaashad buuxda. Fraps, oo sidoo kale leh adeeg-bixiye isku-dhafan oo badan, ayaa yareyn kara waxqabadka luminta hababka duubista fiidiyowga haddii aad leedahay processor-ka multi-core.
Fraps waxay bixisaa fursado dhowr ah oo loogu talagalay duubista fiidiyowyada. Waad dejin kartaa cabirka feyl ee fiidiyowyada aad ku duubi doonto Fraps ugu badnaan 4 GB. Intaas waxaa sii dheer, waad goaansan kartaa inta FPS ee fiidiyowyada lagu duubi doono. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku duubto fiidiyowyada ugu badnaan 120 FPS.
Fraps, waxaad ku qaadan kartaa shaashadaha ciyaaraha sidoo kale waxaad ka qaadan kartaa shaashadda kumbuyuutarkaaga. Haddii aad rabto, waad u habeyn kartaa barnaamijka si aad u qaadatid shaashadda iskudhafyada oo aad midba midka kale u cayimayso Waa suurtagal in la beddelo furaha toobiye ee aad u isticmaali doontid shaqadan iyo dhammaan furayaasha kale ee toobiye marka loo eego dookhaaga.
Astaamaha halbeegga ah ee Fraps, waxaad ku cabbiri kartaa waxqabadka kombiyuutarkaaga ciyaaraha. Markaad daarto miiska barnaamijka FPS, waxaad la socon kartaa qiimahaaga FPS waqtiga dhabta ah shaashadda ciyaaraha.
Cabirka Faylka: 2.22 MB